Khabar Break - ‘कसैलाई चित्त नबुुझ्दैमा हामी रोकिनेवाला छैनौं ! ’
Thursday 19th of October 2017, 5:48:03 am
‘कसैलाई चित्त नबुुझ्दैमा हामी रोकिनेवाला छैनौं ! ’
अन्र्तरवार्ता Published On: Wednesday 19th of October 2016, 01:15 PM
नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) मकवानपुुरमा पार्वती रानालाई संघको केन्द्रबाट आधिकारिता प्राप्त भएपछि संघ मकवानपुुर अहिले विभिन्न गतिविधीमा सक्रिय छ ।अध्यक्ष रानासंग अनेमसंघका गतिविधी, नेतृत्व विवादको विषय, आगामी कार्य योजना लगायतका विषयमा हाम्रा फिचर प्रमुख शिव चौलागाईंले गरेको कुराकानी
अहिले अनेमसंघ मकवानपुुर कसरी अघि बढिरहेको छ ?
– अनेमसंघको नेतृत्व गर्ने अवसर साथीहरुले मलाई दिएपछि तत्कालै बैठक बसेर दुुई वर्षे कार्यकालमा गर्न सकिने योजना तयार पारियो । महिलालाई राजनितीक जागरणका लागि महिला संगठनमा आबद्घताको ठूूलो अर्थ हुने गर्दछ । अनेमसंघमा आबद्घ भएका सबै साथीहरुसंग सदस्यता पनि छैन । त्यसकारण अनेमसंघको सदस्यता प्रदान गर्ने काममा अहिले हामी होमिएका छौं । यस्तै, जिल्ला, नगर, क्षेत्र, गाउँ, टोल, वडा सबै क्षेत्रमा अनेमसंघ सुुदृढिकरण तथा संगठन विस्तारका लागि हामी लागिपरेका छौं । महिलाका लागि राजनीतिक, महिला अधिकार लगायतका विषयमा प्रशिक्षित गराउँदै उनीहरुको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै नेतृत्व क्षमता विकास गराउन मेरो नेतृत्वको अनेमसंघ पूूरै लागिपरेको छ । संगठन बिलियो बनाउनका लागि गाउँ गाउँ पुुगेर सङ्गठनका बारेमा प्रशिक्षित गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौं ।
हाम्रो कार्ययोजना अन्तर्गत नेपाली हिन्दु महिलाहरुको महत्वपूूर्ण पर्व तीजमा जागरणमूूलक सांस्कृतिक कार्यक्रम गरियो । महिला अधिकार, संगठन लगायतका विषयमा महिलालाई सचेत बनाउने माध्यम वास्तवमा तीज बन्यो । अनेमसंघ र युुवा संघबाट जिल्ला र नगर महिला विभागले तीज विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम गरियो । तीज विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तरमा पनि हामीले आयोजना ग¥यौं । तीज विशेष कार्यक्रम गर्नुको मुुख्य उद्घेश्य भनेको संस्कृतिको जगेर्ना, महिला सचेतनाका साथै महिला परिचालन थियो । हाम्रो सोच अनुुसार काम गर्नमा हामी सफल भयौं भन्ने मलाई लागेको छ । यिनै महत्वपूूर्ण साङ्गठानिक अभियानमा हामी निरन्तर लागिपरेका छौं ।
भनेपछि तपाईको कार्यकालमा अनेमसंघले संगठन सुुदृढिकरणका साथै पार्टीलाई समेत फाइदा पुुग्ने कार्यहरु गर्नेछ ?
– सुरुमा त अनेमसंघ के हो ? र यो सङ्गठन किन आवश्यक छ, यसलाई महिला हितका लागि अहिले के कसरी काम गरिरहेको छ भनेर आम महिलालाई प्रष्ट पार्नुछ । अनेमसंघमा आबद्घ नभएकालाई आबद्घ गराउने काममा हामी लागिपर्नेछौं । पार्टीको सङ्गठित सदस्य हुुनका लागि योग्यता भएर पनि सदस्यता नपाइरहेकालाई सदस्यता दिलाउने सवालमा हाम्रो अभियान नै जारी रहनेछ । महिला सङ्गठन भएकाले महिला हिंसा हटाउन पहल गर्ने, महिला अधिकार प्राप्तीका लागि पहलकदमी गर्ने, अब हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि महिलाको जित सुनिश्चित हुुने वातावरण तयार पार्ने लगायतका कामहरु गरिनेछ । जसबाट पार्टीलाई ठूूलो सहयोग पुुग्नेछ ।
अनेमसंघ मकवानपुुरको मातृ पार्टी एमाले, अन्य पार्टीका महिला सङ्गठनहरुसंग कस्तो सम्बन्ध छ ? कार्यक्रमहरु गर्दा कत्तिको समन्वय हुुन्छ ?
– अनेमसंघ मकवानपुुरको पार्टी जिल्ला कमिटीसंग राम्रो सम्बन्ध छ । पार्टीका आम कार्यकर्तासंग सुमधुर सम्बन्ध छ । अरु पार्टी तथा तिनका भ्रातृ संगठनसंग सम्बन्ध सुमधुुर नहुुने कुुरै भएन । मकवानपुरको स्थानीय सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसंग आपसमा सम्बन्ध साह्रै राम्रो छ । जिल्लाका विभिन्न निकायहरुसंग आपसमा सुुमधुुर सम्बन्ध कायम गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौं । बरु एमाले जिल्ला कमिटीको नेतृत्वले चाँही हामीलाई हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ । अनेमसंघलाई पार्टीले सहयोगी भूूमिका नखेलेका कारण हामीलाई काम गर्न चुुनौती भइरहेका छन् । तर म नीति र विधि अनुुसार अघि बढ्ने मान्छे भएकाले उहाँहरुसंग पनि सम्पर्क, समन्वय, सहमतीमा ल्याउदै अघि बढेको छुु । सबै संग परामर्श गर्दै अनेमसंघलाई सशक्त, नमूनाको महिला संगठन बनाउने मेरो योजनाले पार्टी नेतृत्वलाई फाइदा पुुगिरहेको छ ।
तपाई पार्टीलाई फाइदा पुुग्ने गरी आपसमा समन्वय गर्दै अघि बढिरहेको कुुरा गर्नुुहुुन्छ तर मकवानपुुर अनेमसंघमा अझै पनि नेतृत्वको विषयमा विवाद छ नि ?
– यो विवाद निकाल्नुुपर्ने विषय होइन । किनकी बहुुमत सदस्यले पारित गरेको कुुरामा विवाद सिर्जना गर्नुको कुुनै अर्थ हुुन्न । तर केही नेतृत्वलाई पकेटको नेता र कार्यकर्ता हुुनुुपर्ने सोचका कारण सुरुमा सानो समस्या देखिएको थियो । अब नेतृत्वको विषयमा कुुनै विवाद छैन । अनेमसंघ मकवानपुुरको नेतृत्व मैले सम्हालिरहेको छुु। केन्द्रले आधिकारिकता मलाई नै दिएको छ । संगठनका गतिविधी गरेर अहिले हामीलाई भ्याई नभ्याई भइरहेको छ । कुुनै गतिविधी नभएको दिन नै छैन । हाम्रो यो सक्रियता कसैलाई चित्त नबुुझेर हामी रोकिनेवाला पनि छैनौं । संगठन निर्माणको अभियानमा कसैले चाहेर पनि अब अनेमसंघलाई रोक्न सक्दैनन् ।
समग्रमा महिला सवालमा केन्द्रित हुुँदा महिला अधिकार स्थापित गर्नका लागि चूूनौती चाँही के छन ?
–महिलाका हक स्थापित गराउने सवालमा विभिन्न चुुनौती एवम् समस्याहरु छन् । महिला महिला एक हुुन नसक्नुु, महिलाले नै आफूू बाहेक अरुको नेतृत्व स्वीकार नगर्नु, महिलाको एजेण्डामा एकमत भएर जान नसक्नुु, राजनितीक सचेतना नहुुनुु, स्वतन्त्र भएर सामाजिक अभियानमा लाग्न नपाउनुु, सामाजिक विकास अभियानका काममा भाग लिन समस्या हुुुनुु, अझै पनि घरेलु हिंसाजस्ता सामाजिक समस्या समस्या कायम छन् । यि तमाम चुुनौती र समस्याका बिचमा हामी महिला हक अधिकार स्थापित गर्ने अभियानमा लागिपरेका छौं ।